भाडावालालाई काठमाडौंका घरबेटीको दिनहुँ व्यंग्यः ‘सरकारी टहरो हाे सित्तै बस्न पाइन्छ ?’
रमेश भारती काठमाडौं, १२ जेठ
‘आमा घर आउनसक्ने अवस्था छैन । घरबेटीले दिनहुँ भाडा मागेर किचकिच मात्र गर्छन् । ३ महिनाको घरभाडा २७ हजार भए छ । कसरी तिर्नु ? उपाय छैन । कोरोनाभन्दा घरबेटीको किचकिचले ज्यान जाने भयो’ घटेकुलो सामुदायि कप्रहरी कार्यालय अगाडि १ युवती फोनमा परिवारसँग सम्वाद गर्दै हिँडिरहेकी थिइन् ।
उनले साथमा ११ वर्षका बालक हात समातेर हिँडिरहेका थिए । दिदी फोनमा कुरा गरेको सुनेर ति बालक रुन्चे अनुहार लगाएर मुखमा हेरिरहेका थिए ।
घरबेटी भाडा नदिएको भनेर बोल्न छाडेको १५ दिन भयो । अफिसका साहुले पनि गत चैत महिनादेखि फोन उठाउन छाडेको संगिता रायले (नाम परिवर्तन) ले शिलापत्रसँग बताइन् । ‘आफू मात्र भए त जसोतसो बाँच्न सकिन्थ्यो होला । साथमा भाइ नि छ, यसलाई मैले भोगिरहेको समस्याका बारेमा केही थाहा छैन । काम गदै पद्यमकन्या क्याम्पस पढदै थिए’ उनले भनिन्, ‘साहु र घरबेटी उस्तै रहेछन् । दुवैमा मानवता भन्ने हुँदैन रहेछ । सारोगाह्रो परेको होला भन्ने बुझदैन् । साहुले लकडाउनमा तलब दिँदैन । घरबेटीले भाडा छाड्दैन् । अब के गर्नु?’
राय दरमार्गको १ मनि एक्सचेञ्जमा काम गर्दै आएकी थिइन् । लकडाउनका कारण उक्त मनि एक्सचेञ्ज बन्द हुँदा साहुले तलब नदिएको उनको भनाइ छ । उनी राष्ट्रिय सूचना आयोग नजिकै बस्छिन् ।
यस्तै, राजधानी १ सहकारी संस्थामा काम गर्दै आएकी रामेछापकी मनिता तामाङ (नाम परिवर्तन) पनि घरबेटीको दबाब सुन्दासुन्दा वाक्क भएकी छिन् । घरबेटीले सरकारी भवन हो जो बसेनी हुन्छ भनेर दिनहुँ व्यंग्य गर्ने गरेका मनिताले बताइन् ।
भाडा समय तिर्न छाडेपछि घरबेटीले दिनहुँ व्यंग्य गरेर बसी नसक्नु बनाउन थालेको उनले बताइन् । ‘सहकारीमा फोन गर्दा बन्द छ के गर्न सक्छु भनेर साहुले जवाफ दिन्छन् । दिनहुँ घरबेटीले भाडा माग्छन् । के गर्नु घरबाट पैसा मगाउने अवस्था छैन । घरमा मैले नै काम गर्दा खर्च पठाउने गरेको थिए । कसरी घरमा पैसा माग्ने ?’ उनले भनिन्, ‘गत फागनुदेखि तलब समेत सहकारीले दिएको छैन । मासिक ११ हजार सहकारीले तलब दिँदै आएको थियो । कोठा भाडा ५ हजार तिर्नुपर्छ । अब काम नि छैन भाडा कसरी तिरेर घर जान्नु भन्ने चिन्ता भइरहेको छ ।’
मनिता काठमाडौं एउटा सरकारी संस्थामा मार्केटिङको काम गर्दै आएको र उनी गत चैतदेखि कामविन छिन् । जसकारण आयस्रोत नहुँदा खान समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उनी रातोपुलमा बस्दै आएकी छिन् । त्यस्तै, मोरङका मनोज सुवेदी पनि मनिता र संगिता जस्तै दिनमा १ पटक घरबेटीको व्यंग्य सहनुपरेको बताउँछन् ।
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढदै मनोज ज्ञानेश्वरको १ निजी विद्यालय अध्यायपन गराउँदै आएका थिए । गत चैतदेखि कोठामै लकडाउनमा बसेर दिन बिताइरहेको मनोजले बताए । ‘भाडा महिनापिच्छे तिर्ने गरेको थिए । विद्यालयले तलब महिनापिच्छे दिन्थ्यो । तर, चैतदेखि विद्यालय बन्द भयो साथमा भएको पैशाले खानेकुरा किन्दै ठिक हुन्छ । काम नभए पनि दाम हुँदन कहाँबाट पैसा ल्याएर भाडा तिर्ने होला’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसले चिन्ता भइरहेका बेला घरबेटी भाडा नतिर्ने भनेर व्यंग्य हानेर मार्नै लागे । ज्यान बचाउन मुस्किल छ । घरबेटीले दिनहुँ भाडा माग्छन् । भोलि कमाएर तिर्छु भनेको बाउको घर भनेर जवाफ फर्काउँछन् ।’
लकडाउनमा काम गर्ननपाएका धेरै सर्वसाधारण भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८, ललितपुरमा ४१ र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिस भाडामा बस्ने गरेको तथ्यांक छ । देशभर १७ प्रतिशत मानिस घर भाडामा बस्ने गरेको जनगणनाले औल्याएको छ । हाल घरभाडामा बस्ने दर बढेर २१ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।
घरबहालमा लिनेदिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन २०२० मा घर बनाउनेको ८ र ९ नम्बर बुँदामा व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकार यो ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छ । घरभाडामा लगाएको रकम प्रायः घरवाला कर छल्दै आएका छन् । घरवालाले वालमा बस्नसँग सरकारले तोकेभन्दा ३ गुणा भाडा उठाउँदै आएका छन् । तर, राज्यले भने घर भाडालाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । घरभाडा करको दायरामा ४० प्रतिशतमा मात्र आएको सरकारी तंथ्याकमा छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७७, ०८:०५:००
छाड्नुहोस् यी ४ वहाना
श्रीमतीलाई खुशी पार्ने १५ उपाय
नेपालमा सलहको संकट टर्‍याे, जोखिम सकिएकै हो त ?
कामदारको प्रश्न: नेपालमा श्रममन्त्री छन् र ?
नेपालमा सलह झुण्ड घट्यो, भारतबाट छिर्ने सम्भावना भने कायमै
वैदेशिक राेजगारीमा ठगी र सिण्डिकेटको मुद्दा लागेका व्यवसायी बोर्डका विज्ञ !
'सलहले पुर्‍याएको क्षतिका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी हुन्छ'
सर्पको टोकाइबाट श्रीमानको मृत्यु, श्रीमतीको उपचार जारी
गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरामा संक्रमित थपिए, चहलपहल घट्यो